खाँदबारी : संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकाका मेयर विपिन राई नेतृत्वको टोलीले गाग्रो बोकेर जंगल चहारेको दुई साता हुन लाग्यो । राई नेतृत्वको टोलीले ३ हजार परिवारलाई पुग्ने पानीको मुहान खोजी गरिरहेको छ । गाउँभन्दा माथिका धेरै जंगल घुमे पनि ‘खास उपलब्धि’ हात नपरेको मेयर राईको भनाइ छ ।
मेयर राईका अनुसार मुहान खोजी र योजना सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, यो बजेट पूर्वाधार तयार गर्नमै खर्च हुने देखिएको छ । थप रकमका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले सुनाए । विभिन्न मुहानलाई एकत्रित गरी पानी ल्याउन १५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान प्राविधिकले गरेका छन् । उपमेयर राईका अनुसार तत्काल योजना सञ्चालन गरी पानी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘एउटा मात्र मुहानको पानी दीर्घकालसम्मका लागि पर्याप्त हुने देखिएन’, उनले भनिन्, ‘ओढारेसहितका विभिन्न मुहानको पानी संकलन गरी ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’
कुवा रित्तिए बित्यास !
संखुवासभा पाँचखपन–४ खानीगाउँको कुवा भरिएर धारामा पानी आउने आसमा लाइन लागेका स्थानीय ।
बिहान ३ देखि रातको १० बजेसम्म कुवा रुङ्छन्, स्थानीय । ‘बढीमा चार–पाँच घण्टा कुवामा जम्मा हुने पानीले कतिलाई पुग्नु ? त्यो पानी त धारोबाट झर्दाझर्दै रित्तिन्छ’, उनले भनिन्, ‘कुवामा को अगाडि पुग्ने भन्ने होडबाजी हुन्छ । ढिलो पुग्नेले पानी भर्न पाउँदैनन् ।’
स्थानीय सरकारका लागि पानी अभाव चुनौती बनेको छ । पानीकै लागि बसाइँ जाने क्रम बढिरहेको छ । ‘खानेपानी अभाव समाधान गर्न नसके अझै बसाइँ सर्नेको संख्या बढ्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘पानीको जोहो गरेर बसाइसराइ रोक्नु चुनौती बनेको छ ।’ पाँचखपन–४ खानीगाउँका गंगाबहादुर विक, गोपाल विक, चन्द्र श्रेष्ठ, गणेश विक, भीम श्रेष्ठ, गंगा श्रेष्ठलगायत १० परिवार बसाइँ हिँडेको स्थानीय बुद्धि श्रेष्ठले बताए ।
पोखरा विमानस्थलको निर्माण तोकिएको समयअगावै हुन्छ : मन्त्री अधिकारी
मन्त्रीले थर्काएर उल्ट्याए संसदीय समितिको निर्णय
भन्सार नहुँदा त्रीदेशीय नाकाबाट बहुमुल्य वस्तुको तस्करी
टोखा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत एक लाख घुस सहित पक्राउ
धुम्बाराहीमा काइजोन बैंक्वेट सञ्चालनमा